Tinye Media Gị n'Entanet mfe na Wimpy Player | Martech Zone
Tinye Media na saịtị gị dị mfe na Wimpy Player
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 5, 2007 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 5, 2007 Douglas Karr
Afọ ole na ole gara aga, m na-achọ ihe ọkpụkpọ Flash MP3 dị mma ka nwa m wee tinye ya music ya blog mfe. Ndị ọkpụkpọ Flash dị mma iji mejuputa n'ihi na ha nwere ike ịkwanye egwu ahụ kama ime ka onye ọrụ were ya niile n'otu oge. Mgbe m chọọ na nyocha, m mechara mee n'ofe Onye egwu Wimpy.
Izu ụka a, ajụjụ ọnụ m mere maka NPR na iji ihe ntanetị emeziwanye gị ụgwọ e gwa online. Ebe ahụ dị mma nke na achọrọ m ịdee ya na ngwa weebụ m wuru, Payraise mgbako.
Wimpy nwere ọtụtụ egwuregwu, bọtịnụ dị mfe, ihe ọkpụkpọ egwu, na ọkpọ vidiyo. Ikekwe ihe kachasị mma n'ime ha atọ bụ na ha bara uru ma nwee ọfụma. M emebe ihe ọkpụkpọ na saịtị nwa m nwoke n'ihe dị ka nkeji 30.
Emere m a onye ọkpụkpọ maka Jones Soda na ha gosipụtara na weebụsaịtị ha n'afọ gara aga. Nyaahụ, ahaziri m ọkpụkpọ bọtịnụ dị mfe maka Payraise mgbako n'ihe dị ka nkeji iri.
Audio bụ ngwá ọrụ dị egwu maka weebụsaịtị. Ekwetaghị m na ekwesịrị iji ya ghari iwe ma ọ bụ bido na akpaghị aka (ọ masịrị m ịnụ ihe ọdịyo dị n'ịntanetị!), Mana ọ nwere ike tinye ọtụtụ ihe na weebụsaịtị - ịnye mmadụ dịka foto ma ọ bụ vidiyo dị. Maka ozi ma ọ bụ ngwa weebụ, ihe ntanetị nwere ike inye ụfọdụ ikike na saịtị ahụ.
Martech Zone: Ejiri # 1 na Technorati
Ọ bụ obere ihe ndị na - eme ka ahụmịhe onye ọrụ gị ka mma!